Shona Paper 1 Practice
Shona Paper 1 Practice : Question 1 of 9
SARUDZA IZWI RAKAKODZERA KUZADZISA MITSARA IYI
Gore rino vakarima ------ vakakohwa zvikuru. Gore rino vakarima ------ vakakohwa zvikuru.
Vasikana vakaenda ------ kundotsva mazhanje. Vasikana vakaenda ------ kundotsva mazhanje.
SARUDZA MUTSARA WAKANYORWA ZVAKANAKA
Mitsara yokutanga.. Mitsara yokutanga..
Ko, Sabhuku munaye here. Ko, Sabhuku munaye here.
Ko,Sabhuku munaye here! Ko,Sabhuku munaye here!
Ko, Sabhuku munaye here? Ko, Sabhuku munaye here?
Ko, Sabhuku munaye here Ko, Sabhuku munaye here
Mitsara yepiri.. Mitsara yepiri..
Vaenzi vedu vakasvika mangwana. Vaenzi vedu vakasvika mangwana.
Vaenzi vedu vachatosvika mangwana. Vaenzi vedu vachatosvika mangwana.
Vaenzi vedu vatosvika mangwana Vaenzi vedu vatosvika mangwana
Vaenzi vedu vachasvika mangwana. Vaenzi vedu vachasvika mangwana.
Tora mutsvairo utsvaire mumba. Tora mutsvairo utsvaire mumba.
Tora musvairo utsvaire mumba. Tora musvairo utsvaire mumba.
Tora muswairo utsvaire mumba. Tora muswairo utsvaire mumba.
Tora mutsairo uswaire mumba. Tora mutsairo uswaire mumba.
VERENGA NYAYA DETEMBO IRI UGOPINDURA MIBVUNZO INOTEVERA
Pasi chigare mvura yaiti kana yaramba kunaya kwaibikwa doro remukwerera rekuikumbira. Svikiro guru renzvimbo ndiro raizodetemba kuvadzimu seizvi: Imi vari kumafuramhepo! Nhasi taungana pano. Pwere kuchema! Zvipfuyo zvoparara, Zvirimwa zvangova mufushwa! Matsito chaiwo. Toyaura here imi muripo Chibwechitedza? Hamungatirangarirewo here nhai vakuru? Kunyangwe iri mhosva hayo! Hairipwi here? Inga kutadza ndokwedu isu vanhu, Revai zvamunoda tikusvitsei! Inga tanzwa. Shamhu yenyu inorwadza. Chinzwiraiwo vana venyu tsitsi! Vaitireiwo tsiye nyoro! Muvadonhodzere enyu mate enyaradzo, Mate anonyorovesa. Mate anopembererwa nemhuka neshiri dzesango. Mate anoera. Mate oupenyu Imi vemoyochena! Wakachena kuti chuchu! Somwedzi wechirimo
Chii chiri kukumbirwa mudetembo iri? Chii chiri kukumbirwa mudetembo iri?
Chikumbiro ichi chinokumbirwa kunani? Chikumbiro ichi chinokumbirwa kunani?
Iwe unofunga kuti pwere dzinochemei? Iwe unofunga kuti pwere dzinochemei?
kuwandisa kwemvura kuwandisa kwemvura
kufirwa nemombe kufirwa nemombe
mhepo yanyanya kuvhuvhuta mhepo yanyanya kuvhuvhuta
Sei zvirimwa zvafananidzwa nemufushwa? Sei zvirimwa zvafananidzwa nemufushwa?
Sekuverenga kwawaita munhu akapara mhosva, anofanira kuita sei? Sekuverenga kwawaita munhu akapara mhosva, anofanira kuita sei?
Kukanganwa nezvayo Kukanganwa nezvayo
Kuripirwa nevamwe Kuripirwa nevamwe
Kupomera vamwe Kupomera vamwe
Mazwi okuti ‘vaititireiwo tsiye nyoro anotiudza kuti vanhu vaida…. Mazwi okuti ‘vaititireiwo tsiye nyoro anotiudza kuti vanhu vaida….
kuramba vachitadza kuramba vachitadza
vaida kunzwirwa tsitsi vaida kunzwirwa tsitsi
vaituka midzimu vaituka midzimu
vaisavimba nemidzimu vaisavimba nemidzimu
Kunze kwevanhu, chii chimwe chinofarira mvura? Kunze kwevanhu, chii chimwe chinofarira mvura?
Mhuka neshiri Mhuka neshiri
Hakuna chimwe Hakuna chimwe
Doro rataurwa nezvaro mundima rinonzi chii? Doro rataurwa nezvaro mundima rinonzi chii?
ZADZISA MITSARA IYI NENYAUDZOSINGWI YAKAKODZERA
Akanzi nemago pamuromo…. Akanzi nemago pamuromo….
Chikanga akati -----kuramba mhosva dzose dzaaipomerwa. Chikanga akati -----kuramba mhosva dzose dzaaipomerwa.
Kunze kwaipisa zvisina mukare akamboona. Kana kashiri kechivangazuva kaimba kachipupura kuti zuva rakanga ranyanya kari kuutogotogo hwemuunze. Dondo rose rakanga rakati di-i . Nechapati paro nechokurekure uko, shezhu chete ndiyo yanzwikwa kuti checherere. Chitsere nemukadzi wacho pazvakanzwa kurirwa kweshiri iyi zvakanyevenuka. Mhuka idzi dzakawedzera nhanho kudzamara dzasvika payakanga iri. Shiri iya yakatanga kuti bhururu mhaa, bhururu mhaa mumuti uyo neuyo. Dzakaramba dzichiitevera kusvikira yazoramba iri mumubvumira mukuru kwazvo. Zvitsere zviya zvakakanda meso azvo mumuti muya wanike haikona kutaura. Muzihunde mezimuti riya makange mune mhango yenyuchi dzaiva neuchi hwaiva hwakasisa chose. Pasi pakanga patoita kasipiti chemusvi waidonha. Chitsere chikono chakati karamata ndokupinda mumhango iya. Chakatanga kumora chichibudisa ruoko chechete chichitambidza mudzimai wacho aiva pasi. Muvhimiwo akati pfacha nepamuti uya. Akanga akwezvewa nokurira kwezhezhu. Akanga afa nenzara sezvo masango akanga ari matema. Naizvozvo akasvikodzinga chitsere chakanga chiri pasi chimwi-imwi-i. Akatanga kutambira uchi hwuya hwaibura. Sezvineiwo chitsere chaiva mumuti chakazogunzva ruoko rwemunhu ndokukahadzika. Chakabvunza chichiti, ‘’ Chii chati dhabha dhabha chine ruoko rwusina mvere?’’
Musi waitika nyaya iyi kunotaridza kuti Musi waitika nyaya iyi kunotaridza kuti
kwaitonhora chose kwaitonhora chose
kwaipisa chose kwaipisa chose
kwainaya chaizvo kwainaya chaizvo
Ndeipi shiri yaiimba ichitaridza kupisa kwezuva? Ndeipi shiri yaiimba ichitaridza kupisa kwezuva?
Sei zvitsere zvakafara pazvakanzwa shezhu ichirira? Sei zvitsere zvakafara pazvakanzwa shezhu ichirira?
Zvaida kuiuraya Zvaida kuiuraya
Zvaiziva kuti zvaizotaridzwa nyuchi dzine uchi Zvaiziva kuti zvaizotaridzwa nyuchi dzine uchi
Zvaizotaridzwa muti une mumvuri Zvaizotaridzwa muti une mumvuri
Zvaifarira kusangana nemuvhimi Zvaifarira kusangana nemuvhimi
Zvinorevei kuti mhuka idzi dzakawedzera nhanho? Zvinorevei kuti mhuka idzi dzakawedzera nhanho?
Dzakafamba zvishoma Dzakafamba zvishoma
Dzakadzokera shure Dzakadzokera shure
Mukoko wenyuchi waiva pai? Mukoko wenyuchi waiva pai?
Mudavi remuti Mudavi remuti
Hombarume yakanga yanzwa nenzara nepamusana pei? Hombarume yakanga yanzwa nenzara nepamusana pei?
Yakanga yafambisa Yakanga yafambisa
Michero yakanga yapera musango Michero yakanga yapera musango
Yakaita usimbe hwekuvhima Yakaita usimbe hwekuvhima
Haina kuuraya mhuka Haina kuuraya mhuka
Munhu akaita zano ripi rokuti awanewo uchi? Munhu akaita zano ripi rokuti awanewo uchi?
Akakwira mumuti akamora Akakwira mumuti akamora
Akadzinga chitsere chikadzi akatambira uchi Akadzinga chitsere chikadzi akatambira uchi
Akauraya zvitsere Akauraya zvitsere
Akadzinga chitsere chaiva mumuti Akadzinga chitsere chaiva mumuti
Sekuverenga kwavaita chii chanzi chisina makushe mundima? Sekuverenga kwavaita chii chanzi chisina makushe mundima?
Ndeipi yaudzosingwi iri mundima inotiudza kuti ruoko rwemunhu rwakanga rwanyorova? Ndeipi yaudzosingwi iri mundima inotiudza kuti ruoko rwemunhu rwakanga rwanyorova?
dhabha dhadha dhabha dhadha
IPA IZWI RINOPIKISANA NERAKAPIWA MUMAVARA MAHOMBE
Muzukuru wangu weduwee, ungandipawo nwiwa RAIBVA kudai? Muzukuru wangu weduwee, ungandipawo nwiwa RAIBVA kudai?
AKASIMIRA bhachi rake raiva pamutariko AKASIMIRA bhachi rake raiva pamutariko
Mbuya VaRuchira vava nebvunzi….. Mbuya VaRuchira vava nebvunzi…..
Kambudzana …… kanga kachirwara kafa Kambudzana …… kanga kachirwara kafa
Vakafamba ndokuyambuka rwizi….. Vakafamba ndokuyambuka rwizi…..
SARUDZA IZWI RAKAFANANA NERAKAPIWA MUMAZWI MAKURU
Murwizi muna Tetenu makazara NGWENA. Murwizi muna Tetenu makazara NGWENA.
Vakatadza kuona nzira nepamusana kweMHINDO. Vakatadza kuona nzira nepamusana kweMHINDO.
VaBadza vane MUKURUMBIRA wekurima. VaBadza vane MUKURUMBIRA wekurima.
VaRuchira vakati yambu Tetenu mwene vakahuchocha hwahwa hwamatanda. Vakaita rombo rakanaka kuti rwizi urwu rwakanga rwusisina ngwena dzaimboruramo makore akanga adarika. Vangadai vakatetenwa nadzo vakazovirirwa vava muura memakarwe. Vakapepereka ndokusvika pabindu ravo zuva richakacheka nyika. Vakasiya vati muroora wavo mai Esita vasare vachikohwa gandiwa rose rechibage shasha ichienda kwaGavhure kundohushapira. Chembere iyi muhwahwa yakanga isingabviri. Yaitongozezawo imwe chembere yainzi VaMuchakuya yairara musoro uri mumasese. Vakati pfacha mumunda mavo wanikei haano mashura. Chibage chakanga chatemwa chava kuda kupera.Chakavashamisa ndechekuti pakati pemunda pakanga pasiiwa chibage chimwe chete. Vakati varutanga rumbo rwavo rwamashavi okupopota."Iwe mukadzi waRayi! Mashura eyi awandiitira?Zisimbe regadzi.Shanga rechibage iri warisiireyi? Iyevo Rayi ndakambomuyambira kuti asaroore nyope iyi akaita nharo. Kuomesa shaya somunhu anotsemura dohwe zvino hezvi."Chembere yakati badza mumaoko nhaa. Ndokuti pfira-pfire mate mumaoko.Vakasvikoti chibage chiya dzvii,vakati vamadenha mago emaombera.Vakanzi ndure nemago mhere ndokuti kwetsu vodzadzarika vonanga kumba.Vakasvika ziso memiromo zvati tuku tuku kuzvimba ndokurara vachingoyuwira.
VaRuchira vaibvepi munyaya iyi? VaRuchira vaibvepi munyaya iyi?
Sei rwizi Tetenu rwaityisa kuyambuka kare kwarwo? Sei rwizi Tetenu rwaityisa kuyambuka kare kwarwo?
Rwaiva rwakazara mvura. Rwaiva rwakazara mvura.
Rwaiva nenjuzu. Rwaiva nenjuzu.
Rwaigara makarwe. Rwaigara makarwe.
Rwaiva nemadziva aiyera. Rwaiva nemadziva aiyera.
Munyaya izwi rokuti kutetenwa rinorevei? Munyaya izwi rokuti kutetenwa rinorevei?
VaRuchira vakasvika kumba kwavo nguvai? VaRuchira vakasvika kumba kwavo nguvai?
Sei VaRuchira vakananga nokumunda kwavakabva kwaGavhure? Sei VaRuchira vakananga nokumunda kwavakabva kwaGavhure?
Vaida kundokohwa. Vaida kundokohwa.
Vaida kubatsira muroora wavo basa. Vaida kubatsira muroora wavo basa.
Vaida kusakura chibage. Vaida kusakura chibage.
Vaida kuona kana muroora avo aita basa. Vaida kuona kana muroora avo aita basa.
Chii chinoratidza kuti VaRuchira vaisawirirana namai Esita? Chii chinoratidza kuti VaRuchira vaisawirirana namai Esita?
Vakavanyima doro Vakavanyima doro
Vakavanyima zvekudya Vakavanyima zvekudya
Chii chakaitika kuna VaRuchira pavaida kudzura chibage? Chii chakaitika kuna VaRuchira pavaida kudzura chibage?
Vakadonha nekudhakwa. Vakadonha nekudhakwa.
Vakakwanisa kuchidzura. Vakakwanisa kuchidzura.
Vakarumwa nemago. Vakarumwa nemago.
Zvinorevei kuti VaRuchira vakarara vachingoyuwira? Zvinorevei kuti VaRuchira vakarara vachingoyuwira?
Vaiva vakazvimba Vaiva vakazvimba
Vainakirwa nehope. Vainakirwa nehope.
Vakarota hope dzinotyisa. Vakarota hope dzinotyisa.